Palvelija - Fince - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: palvelija (Fince - Birmanca)
ထိုပရောဖက်အမျိုးသားလုလင်သည် ဂိလဒ် ပြည် ရာမုတ်မြို့သို့ သွား၏။
ကျွန်သည်လည်း၊ မိမိပြုလေသမျှတို့ကို ဣဇာက် အား ကြားပြောပြီးမှ၊
Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.
တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။ ကျွန်သည် သခင်ထက်မသာ။
Taitava palvelija saa kuninkaan suosion, mutta kunnoton hänen vihansa.
Taitava palvelija hallitsee kunnotonta poikaa ja pääsee perinnönjaolle veljesten rinnalla.
ပညာရှိသောကျွန်သည် အရှက်ခွဲသောသားကို အုပ်စိုး၍ ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူ အမွေခံတတ်၏။
Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
အကြင်ကျွန်သည် ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကို အရှင်သည် ပြန်လာ၍တွေ့၏။ ထိုကျွန်သည် မင်္ဂလာ ရှိ၏။
အကြင်ကျွန်သည် ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကို အရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏။ ထိုကျွန်သည် မင်္ဂလာရှိ ၏။
Ei ota palvelija sanoista ojentuakseen: hän kyllä ymmärtää, mutta ei tottele.
စကားအားဖြင့်သာ ကျွန်ကို ဆုံးမ၍ မနိုင်ရာ။ သူသည် နားလည်သော်လည်း၊ နားမထောင်ဘဲ နေလိမ့် မည်။
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: `Minun herrani viipyy`,
သို့မဟုတ်မူကား၊ အကြင်ကျွန်ဆိုးက ငါ့အရှင်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲ၌အောက်မေ့သည်။
လူဇာတိအားဖြင်း ဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တော်မူ ထသော၊
ထိုမြို့၌ တပ်မှူး၏ကျွန်တယောက်သည်နာ၍ သေခါနီးရှိ၏။ သူ၏သခင်သည် သူ့ကိုချစ်၍၊
ထာဝရဘုရား၏ကျွန်၊ နုန်၏သား ယောရှုသည် အသက်တရာတဆယ်ရှိသော် အနိစ္စရောက်လေ၏။
သင်တို့အမှုကို စောင့်၍၊ ခရစ်တော်ထံ၌ သစ္စာရှိသော ဆရာတည်းဟူသော ငါတို့ချစ်သော ကျွန်ချင်း ဧပဖြသည် သင်တို့ကို သွန်သင်သည်အတိုင်း သင်တို့သည် ကြား၍၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို မှန်ကန် စွာ ဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ ထိုသို့သောအကျိုးရှိ၏။
Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.`
အသုံးမရသော ထိုငယ်သားကိုငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ၊ ပြင်အရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့ နှင် ထုတ်ချလိုက်ကြဟု စီရင်တော်မူ၏။
Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka on vailla leipää.
စားစရာမရှိဘဲ ဝါကြွားသောသူထက်၊ အသရေ မရှိ၊ ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရသော သူသည်သာ၍ ကောင်း၏။
吉尔吉斯斯坦反对阵营领袖 (Çince (Modern)>Tayca)at least i'm nota(İngilizce>Galce)北京不希望新措施太强硬 (Çince (Modern)>Tayca)scheda elettronica (İtalyanca>Almanca)راهنمای orkut (Farsça>İngilizce)baixades (Katalanca>Slovakça)kameradschaftlich (Almanca>Fransızca)能不能请您介绍一下钱正英 (Çince (Modern)>Tayca)facebook chala raha hu (Hintçe>İngilizce)starcima (Sırpça>İtalyanca)mga kababayan ko (Tagalogca>İngilizce)ka maumahara tonu matou (Maori>İngilizce)guest control (İngilizce>Arapça)upgrade opera (İngilizce>Vietnamca)也有很多的成绩 (Çince (Modern)>Tayca)sluiten de verwachtingen aan op de inhoud (Hollandaca>Fransızca)odrazující (Çekçe>Lehçe)what time do your homework (İtalyanca>İngilizce)well crystallinity (İngilizce>Yunanca)lahat ng malilikom na pera ay gagamitin as budget (Tagalogca>İngilizce)insured (İngilizce>Çince (Modern))im laufenden betrieb verbraucht ein (Almanca>Fransızca)corong turas (Malayca>İngilizce)saxe movie saxe movies (Hintçe>İngilizce)english ng dinamay (Tagalogca>İngilizce)